बलिउडका सबै भन्दा बढी ब्यस्त अभिनेत्रीहरु– कसको हातमा कति फिल्म ? – mYKantipur
बलिउडका सबै भन्दा बढी ब्यस्त अभिनेत्रीहरु– कसको हातमा कति फिल्म ?
काठमाडौं । अहिलेको समयमा बलिउडमा आलिया भट्ट, करीना कपूर, क्याट्रिना कैफ लगाएत अभिनेत्रीहरु निकै चर्चामा छन् । यी सबै अभिनेत्रीहरु आ–आफ्नो फिल्ममा ब्यस्त छन् । कुनै अभिनेत्रीको हात तीन–तीन वटा फिल्म छ भने कुनै सँग चार–चार वटा !
कुन अभिनेत्रीको हातमा कति फिल्म ?
आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्रलाई लिएर ब्यस्त छन् । यो फिल्ममा उनको अपोजिटमा अभिनेता रणवीर कपूर देखिदैछन् । यस सुपर नेचुरल फिल्मलाई अयान मुखर्जीले निर्देशन गरिरहेका छन् । ब्रह्मास्त्र पछि आलिया इंशाअल्लाह, बुबा महेश भट्टको फिल्म ‘सडक–२’ एसएस राजामौलीको फिल्म ‘आरआरआर’मा देखिदैछन् ।
अभिनेत्री तापसी पन्नु आफ्नै कुशल अभिनयका कारण बलिउडमा आफ्नै पहिचान बनाएकी छन् । उनको साथमा ‘मिशन मंगल’, सांड कि आंख’, ‘गेम ओभर’, र ‘थप्पड’ जस्ता फिल्म छन् ।
अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ अभिनित फिल्म ‘भारत’ ५ जुनबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । यो फिल्ममा उनको अपोजिटमा सलमान खान देखिदैछन् । यसका साथै क्याट्रिना सलमान खानको साथमा एक था टाइगरको तेस्रो पार्टमा देखिनेछन् । साथै उनी ‘सूर्यवंशी’ फिलममा अभिनेता अक्षय कुमारको अपोजिटमा देखिदैछन् ।
भूमि पेड्नेकरको पछिल्लो फिल्म ‘सोन चिडिया’ थियो । अब उनी सांड कि आंख, पति पत्नी और वो, बाला, डाँली किट्टी और वो, चमकते सितारे, तख्त, लगाएतका फिल्ममा देखिदैछन् ।
बलिउडकी मष्ट ट्यालेन्टेड अभिनेत्री हुन् श्रद्धा कपूर । उनी अभिनयसँगै डान्स र गायनमा पनि माहिर मानिएकी छन् । अहिले उनी स्ट्रिट डान्सरको सुटिङमा ब्यस्त छन् । यसका साथै उनी प्रभाषको साथमा साहोमा देखिदैछन् । त्यस्तै फिल्म छिछोरेमा उनले मुख्य भूमिकामा देखिदैछन् ।
अभिनेत्री कंगना रनौत अहिलेको समयमा ‘मेन्टल हे क्या’ र ‘पङ्गा’को सुटिङमा ब्यस्त छन् । यसका साथै उनी जयललिताको बायोपिक मार्फत साउथ उद्योगमा पनि डेब्यु गर्दैछन् । एक रिपोर्टका अनुसार कंगनाले उक्त फिल्मको लागि भारी रकम लिएकी छन् ।
करीना कपूरको पछिल्लो फिल्म ‘विरे दि वेडिङ’ थियो । उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाएको थियो । करीनाले अक्षयकुमार स्टारर् ‘गुड न्युज’को सुटिङ पूरा गरेकी छन् । अहिले उनी अंग्रेजी मिडियम फिल्मको टिमसँग जोडिएकी छन् ।